တရုတ်-ဂူဂဲလ် သပွတ်အူဇာတ်ပူဇာတ်ရှုပ်ထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ လှည့်ကွက်များ၊အချိုးအကွေ့များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » တရုတ်-ဂူဂဲလ် သပွတ်အူဇာတ်ပူဇာတ်ရှုပ်ထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ လှည့်ကွက်များ၊အချိုးအကွေ့များ
တရုတ်-ဂူဂဲလ် သပွတ်အူဇာတ်ပူဇာတ်ရှုပ်ထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ လှည့်ကွက်များ၊အချိုးအကွေ့များ
Posted by Dave on Jan 22, 2010 in Other - Non Channelized | 8 comments
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးပြုနေကြသူ သန်းပေါင်းများစွာရှိသောကြောင့် အင်တာနက်နှင့် ဆက်နွယ် သည့် နိုင်ငံတကာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများက ယင်းကြီးမားသောဈေးကွက်ကို မျက်စိကျကြ သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အခြေတကျ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးလျှင် စီးပွားဖြစ်မည်ကို လာဘ်မြင်သော ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီးများထဲတွင် ဂူဂဲလ်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ယခု ဂူဂဲလ်နှင့် တရုတ်အကြီးအကျယ် ပြဿနာတက်နေကြသည်။တရုတ်အစိုးရ အွန်လိုင်း လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများက ဂူဂဲလ်တာဝန်ရှိသူများကို အသိမပေးဘဲ မိမိတို့သဘောဖြင့် ဂူဂဲလ်-တရုတ်အွန်လိုင်း ပိုင် နက်ထဲသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ကျူးကျော်ခံရသည့် တရုတ်နိုင်ငံရောက် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီပေါင်း(၃၀)ကျော် ထဲတွင်ပါဝင်သည်ဆိုသော ဂူဂဲလ်ဖက်က မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့င်္ပြီး ပြသနာလုပ်နေသည် စသော သတင်းများ၊ ကောလာဟလများ တစ်မျိုး ပြီးတစ်မျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့ရာ တရုတ်- ဂူဂဲလ်သပွတ်အူဇာတ်ရှုပ်ကြီးသည် ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်ကာ တ၀ဲလည် လည်ဖြစ်နေလေသည်။ယင်းဇာတ်ရှုပ်ကြီးထဲမှ စိတ်ဝင်စားစရာ လှည့်ကွက်များ၊အချိုးအကွေ့များကို စုစည်း ဖော်ပြသွားပါမည်။
ကောလာဟလများက ဤမေးခွန်းကိုအစဖော်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ဂူဂဲလ်ပိုင် တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ ရုံးခွဲမှ အတွင်း လူများ ကွန်ရက်တိုက်ခိုက်မှု၌ ပါဝင်ပတ်သက်ဖွယ်ရှိနိုင်သည်ဟူသော အစလေးတစ်စကို ဆွဲထုတ်ပြခဲ့သည့် သတင်း ဌာနမှာ ရိုက်တာဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အတွင်းက ဂူဂဲလ်-တရုတ်နှင့် ဂူဂဲလ်အတွင်းပိုင်းကွန်ရက်အကြား အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားသည်ဟု သိလိုက်ရပြီး နောက် ဂူဂဲလ်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများက အခြေအနေ ကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ရသည်။
တရုတ်အစိုးရဖက်က စောဒကတက်သည်ဟု ဆိုကြသည်။တရုတ်လူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက် လူထု အကျိုးမျှော်ကိုး၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သလို လေသံပစ်သည်။တယ်ဆိုတဲ့စာပါလားဟု ချီးကျူးရမည့် တရုတ် အစိုးရက ဂူဂဲလ်၏ အကျိုးစီးပွား ပျက်ရာပျက်ကြောင်း လုပ်ခြင်းမဟုတ်။ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် လုံခြုံရေးကို ကန့်သတ်ခြင်းဖြစ်ရာ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေများကို လိုက်နာသင့်သည်ဟုလည်း တုံ့ပြန်ချေပခဲ့သည်။
ယင်းလှည့်ကွက်သည် သရော်တော်တော် လှည့်ကွက်ပင်ဖြစ်သည်။တရုတ်သည် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများကို သိသာထင် ရှားစွာပင် ဦးစားပေးခဲ့သောကာလမှာ ရှည်ကြာခဲ့သည့်တိုင် အမေရိကန်တို့က ကုန်သွယ်ရေး အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ အမှားသံသရာဝယ် တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေသည်ဟုပင် တရုတ် အစိုးရက ဆိုပြန်သေးသည်။ဂူဂဲလ်၏ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမိခင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ပင်လယ် ရပ်ခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ရှေ့ရေးကို တိုး တက်အောင်လုပ်ဆောင်သင့်ပေသည်ဟုလည်း မြွက်ဟ ပြောကြားကြောင်း ဘလွန်းဘာ့ဂ်သတင်းအရ သိရသည်။
ဗျို့ဒီမယ် ကျုပ်တို့က ခံဖက်ကချည့်ပါ ဆိုပဲ
တရုတ်နိုင်ငံ၏တရားဝင်သတင်းဌာနဖြစ်သည့် ဆင်ဟွာက တရုတ်တို့သည်သာ ခံဖက်ကဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြ သည်မှာ မှတ်သားစရာကောင်းသည်တမုံ့။တခြားနိုင်ငံများနည်းတူ တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့်လည်း ကွန်ရက်တိုက်ခိုက်မှုများ ခါးစီးခံခဲ့ရသည်။ထိုတိုက်ခိုက်မှုများသည် တစ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် ၁၄၈ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာကြောင်း၊ဂူဂဲလ်သည် အခြားသော တရုတ်နိုင်ငံရောက် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီ များနည်းတူ တရုတ်လူမျိုးများ၏ ဓလေ့ထုံးစံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကို လေးစားသင့်ကြောင်း၊ လူမှုရေး တာဝန် ၀တ္တရားများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဂူဂဲလ်အတွက် ခြွင်းချက်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ဆင်ဟွာက ရေးသား ခဲ့သည်။
အာဖရိကတွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီများ တွေ့ကြုံရသည်နည်းနှင်နှင်ပင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဂူဂဲလ်အနေဖြင့် အခက်ကြုံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တရုတ်တို့က ဆိုသည်။
ဂူဂဲလ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသူများက အဆိုပါပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍ တုံ့ပြန်ကြရာတွင် အခြေအနေ ရှုပ်ထွေးနေခဲ့သည်။ တချို့က အကျိုးအမြတ်ပမာဏနည်းသွားနိုင်သည့်တိုင် ထောက်ခံကြသည်။ဥပမာ သွန်းဘာ့ဂ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့မှ အဲလက်စ်မိုတိုလာဆိုသူက“ခင်ဗျားတို့ အနေနဲ့ အစုဝင်ထားတဲ့ လူတွေကို ဖြေလိုက်လေ။သူတို့ပြောတာတွေ အတည်ပြုလိုက်ပြီ။ဒါမှမဟုတ် တရုတ်အစိုးရက ဒီလိုကိုင်တွယ် ပစ်လိုက်ပြီ စသည်ဖြင့်ပြောလိုက်လေ။အဲဒီလို သူတို့ ဖက်ကပါပြီး လိုက်လုပ်ကြမှာတဲ့လား´´ဟု စောဒက တက်ခဲ့သည်။
တရုတ်ဖက်က တားဆီးပိတ်ပင်မှုများကို အံတုယှဉ်ပြိုင်ကာ ဂူဂဲလ်ဖက်က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အွန်လိုင်း လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကိုင်တွယ်တုံ့ပြန်မည်ဆိုလျှင် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာဂငယ်ကွေ့ အချိုးအကွေ့ကို ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ပြိုင် ဖက်ဖြစ်သော ယာဟူးက တရုတ်ဈေးကွက်ကို ကောက်စားလုပ်မည်သာ ဖြစ် သည်ဟု ထောက်ပြသူများလည်းရှိသည်။
တရုတ်နဲ့ ဂူဂဲလ်အားပြိုင်မှုကြောင့် အန်ဒရွိုက်အခြေပြု ဆဲလ်ဖုန်းများ တရုတ်ဈေးကွက်တွင် ဖြန့်ဖြူးမည့် ကိစ္စကို သတ်မှတ်ရက် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရသည်။ယင်းဖုန်းများ၏ရှေ့ရေးအတွက် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ကြ မည်နည်း။
တရုတ်တို့၏ပြည်တွင်း ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုသည် အလုံးစုံကိုချုပ်ကိုင်ခြင်းမဟုတ်ပေ။အများစုကို ကန့် သတ်ချုပ်ခြယ် လိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်တိုင် အင်တာနက်အသုံးပြုသူတိုင်းကို တားဆီးခြင်းမဟုတ်သည်ကို ဂူဂဲလ် ဖက်ကသဘောပေါက်သင့် သည်ဟုလည်း တချို့ကထောက်ပြကြသည်။
တစ်လလျှင် အမေရိကန်၂ဒေါ်လာပေး၍ ပရောက်ဇီများကို အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်ပြန်ကြားနိုင်သော်လည်း တရုတ် အစိုးရက ပြည်တွင်းမှအင်တာနက်သုံးသူ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကန့်သတ်တားမြစ်မှုဖောက်ဖျက်ကြ သည်များကို ဟန့်တား လိုသဖြင့်သာ ဂူဂဲလ်၏အချက်အလက် ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ရန် စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ရာ တချို့က ဂူဂဲလ်တရုတ် ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို မသုံးဘဲ ဂူဂဲလ်အင်္ဂလိပ်ဝက်ဆိုက်ကို ရွေးချယ် သုံးနိုင်သည်ဟု ပြောကြားကြောင်း နယူးယောက်တိုင်းမ်စ် တွင် ရေးသားခဲ့သည်။
ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ဆိုးသည်ဆိုသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှ အင်တာနက်သုံးသူ အများစုသည် နိုင်ငံကြီးအချို့မှ အင်တာနက်သုံးသူများကဲ့သို့ အချက်အလက်အားလုံးကို လိုအပ်ခြင်း မရှိသဖြင့် ဂူဂဲလ်အတွက် တိုက် ရိုက်ထိခိုက်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ဝေဖန်အကြံပြုသူများလည်းရှိကြသည်။
ယာဟူးကလည်း တရုတ်ဈေးကွက်တွင် အင်အားရှိသည့် အလီဘာဘာနှင့်အပြိုင် တောင့်ခံသွားဖွယ်သာ ရှိသည့် အရိပ်အရောင်ပြနေသဖြင့် မည်သူခံရမည်နည်းဟု မေးခွန်းထုတ်မည်ဆိုလျှင် အဖြေမှာ ထင်ထင် ရှားရှားကြီး ပေါ် ထွက်လာပေလိမ့်မည်။
အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများကမူ ပြည်တွင်းအတွေ့အကြုံများရှိခဲ့သဖြင့် လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ပြောဆိုခွင့်ကို လိုသလို ကစား တတ်မည့် သဘောရှိနိုင်ရာ တရုတ်အစိုးရနှင့် လိုက်လျောညီထွေ လုပ်ဆောင်သွားဖွယ်သာရှိသည်ဟု အများက တွက် ချက်ခန့်မှန်းထားကြသည်။
နောက်ဆုံးတွင် တရုတ်နှင့်ဂူဂဲလ်အားပြိုင်မှု သပွတ်အူဇာတ်ပူဇာတ်ရှုတ်ကြီး မည်သို့ပြီးပြတ်သွားမလဲဟု ပရိသတ်များ အနေဖြင့် စောင့်ကြည့်သွားကြရုံမှတစ်ပါး အခြားမရှိပါကြောင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
တရုပ် ဂူဂဲ ထက် ယခု မြန်မာပြည် အင်တာနက်က(ဂူဂဲ) ကိုသာ ကောင်းအောင် လုပ်ပေးကြပါ…။ ကူညီကြပါဗျာ..။
facebook youtube ဘာမှဖွင့်လို့မရပါ
ကောင်းပါတယ်။ ဒီလို သတင်းမျိုးတွေ သိရ ဖတ်ရလို့ Dave ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြန်မာက ဖွင့်လို့မရတာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကပိတ်ထားလို့ပါ ။ http://www.youtube.com ကို လည်းအရင်ကပိတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့အကျင့်လုပ်ပေးလို့ မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ရင် Proxy ကျော်တက် ခွတက်သွားပါပြီ ။ ကြိုက်တဲ့ဆိုဒ် 100 Step လောက်ဘဲကာထားပါစေ ရအောင်ကျော်နိုင်ကြပါပြီ
US ဆီနေတာ ကလည်း ဂူဂဲ ကိုဆင်ဆာ လုပ်ဖို့ ပြော နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံးဟာ အတူတူပါပဲ။
Posted on November 25, 2011 – 10:33 by David Gomez
Well, Lieberman apparently believes that censorship of anti-West and violent jihadist content will keep people from wanting to attack America. At least that’s what it sounds like when you read the senator’s formal letter to Google CEO Larry Page – asking Mountain View to censor content on its blogs.
Inaroundabout way, Lieberman claims that Google playsapart in the war on terror – but should be doing more to help.
Lieberman references the blog of recent “lone wolf” terrorist suspect Jose Pimentel asareason to police content on Google’s blogger platform.
“Pimentel allegedly used the Internet to access instructions to make bombs and share his support for violent Islamic extremism,” writes Lieberman.
“Pimental’s (sic) site is just one of the many examples of homegrown terrorists Google-hosted sites to propagate their violent ideology.”
“I strongly believe that Google should expand that standard to include your other platforms. The private sector plays an important role in protecting our homeland from the preeminent threat of violent Islamic extremism, and Google’s inconsistent standards are adversely affecting our ability to counter violent Islamic extremism online,” Lieberman said.
It sounds like Lieberman supports outright limitations on free speech. Of course, this isn’t the first time the senator has madeacase for government approved filtering of the Internet. In 2010, he argued that an Internet “Kill Switch” in the US is no big deal because China already has one.
တရုတ်ကြီးက သူ့ကိုယ်သူသာ ဆရာထင်နေတာ၊ ကိုယ့်လူတောင်ကိုယ် မယုံရဲဘူး၊ youtube လိုဆိုက်မျိုးကို ပြည်တွင်းမှာ ပိတ်ထားတာသာကြည့်ပေတော့။ ဒါနဲ့များ တရုတ်ကို စူပါ ပါဝါထင်နေသူက ရှိသေး။။ အချက်မသိတော့ သားမက်သူခိုးထင် ဝက်ကိုအမျိုးတင်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့။။။။ အေပေးတရုတ်ကြီး နင်တို့ဂုံယူနေဒဲ့ မဟာတံတိုင်းကို ငါတို့တကောင်းခေတ်က မြန်မာတွေ ပင်လယ်ရပ်ခြား ဖွံ့ဖြိုးမှုထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်နဲ့ သနားလို့ဆောက်ပေးခဲ့ဒါ။။။။။